Gabaryahay Afartaan Waxyaabood U Sameey Ninka Hadaad Rabtid Inuu Ku KoolKooliyo - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Gabaryahay Afartaan Waxyaabood U Sameey Ninka Hadaad Rabtid Inuu Ku KoolKooliyo
Waxaa jira waxyaabo nin nin kasta uu uga baahanyahay xaaskiisa ama saaxiibtiis dhib malahan da’da uu jiro.
Waa kuwaan waxyaabaha uu uga baahanyahay.
1- Xushmadda waa wax mar walba loo baahanyahay, nin kastana waxa uu rabaa in la xushmeeyo xittaa haddii uu da’ yaryahay, nin kasta waxa uu rabaa in xaaskiisa ay xushmeeyso inta uu noolyahay, tani waa waxa uu ninka uga baahanyahay xaaskiisa.
2- Nin walba waxa uu rabaa haweeney daacad ah, haweeney daacad u noqoto waqti kasta iyadoo aanan loo eegin qalad ama sax, dhib malahan da’diisa nin kasta daacadnimo ayuu rabaa.
3- Haweenka waa inay xushmeeyaan raggooda maadaama ragga ay aad u jecelyihiin xushmadda ay xaasaskooda ka helaan, ma doonayaan in dadaalkooda aanan lagu amaanin, nin kasta baahidaan ayuu qabaa oo ah in la xushmeeyo wax kasta oo wanaagsana lagu amaano.
4- Nin kasta waxa uu rabaa haweeney taageero iyo garab u noqoto isla markaana u sacab tunta, ninka ma daalo haddii uu taageero ka helo xaaskiisa balse ninka taageero in gacan qabasho ka waayo xaaskiisa waa kan aanan horey u socon, da’walba uu jiro nin waa kan u baahan taageero, xaas ku taageertana aad ayay u adagtahay in helaan.